Ezinye iziganeko zeengxaki zezopolitiko eHonduras - Geofumadas
Ezinye iziganeko zeengxaki zezopolitiko eHonduras
NgoDisemba, 2012 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
2009 ukuba nyaka ukuba ntlekele yezopolitiko Honduras liqhuma ngohlobo entsha babhukuqwa, kunye kuvuthelwa mpawu buso, kunye zabekwa kwisithuba tangle na imithetho ekhusela kuye; nangona bephula imithetho ekhethekileyo yentando yesininzi. Egeomates ngoku idlula iindwendwe ngenyanga 100,000, kodwa kuluvo wazalwa e Honduras, ngoko ke kunzima ukuba decouple abavakalelwa ngayo le ngxaki, nangona kunjalo kufuneka ukunyanzela kudidi ngaphakathi kule sayithi apho ngcinga kufanelekile kwezopolitiko. Nje ngoko abafundi athembekileyo bazi ukuba iingxaki zamazwe zethu phantse enye, ndithethe ngale maxesha amaninzi; Namhlanje ndifuna ukukhulula ingcamango emfutshane into endiyenzayo, ndineendaba ezincinci kakhulu ukususela kwinto yokugqibela ebhala ngayo xa kwenzeka isiganeko Paraguay.
Kwaye ekubeni i-subjective subjective, ndithanda ukuyivumela ukuba ihambe njengalokhu, ngaphandle kwesakhiwo, ngokuhambelana noko kuphuma ngcamango ngelixa apho ndifuna ukubuyela ekuhambeni nabantwana bam; Kalokunje intombazana ekhanyisa amehlo endiyikisayo ukuqhuba ngeendlela ezivulekile.
... ukuba kukho nayiphi na inzuzo kulo ...
Ukuphulukana ngokukhawuleza kwebhilidi, ngokungathandabuzekiyo, wonke umntu uyayibona inzuzo yolu ngxaki, inqubo emazweni angomakhelwane afana ne-El Salvador ixabisa i-75,000 efile. Ngoku, ukunyakaza kweZelaya eyaziwa ngokuba yiLibertad y Refoundation (I-Free) idibanisa ipesenteji ezithandekayo zeqela lakhe langaphambili, kunye necandelo elisoloko lihlanganyela kunye neengcamango zesigxina.
Siyaqonda ukuba ipesenteji yokuthatha inxaxheba ayiqinisekanga, eya kuthiwa yayaziwa kuphela ngoonyulo oluphambili lukaNovemba lwe-2013 (ukuba kwenzeka ntoni - kutheni ekupheleni kweMeyakucace-). Kodwa ukhetho lwangaphakathi, apho abaviwa bachazwa khona kwiimfuno zokuqala kubonise ukuba ukwakhiwa kweziseko kukubakho, kwaye ukufikelela kwamagosa kunye namagosa kuyabonakala; yintoni iqela elikhulayo elingaze liphumelele. Oku kubalulekile, kuba yonke intshukumo, phantse nayiphi na ilizwe iqalile njengale, nangona kungabikho bonke abasinda ngexesha. Ngo khu seleko -kunye nobungqina bamanye amava afanayo- abayi kufikelela kumongameli ngeli xesha, kodwa baya kukwazi ukufezekisa emva kokunyanzelisa.
siqonde ukuba kube ngunyaka mngeni, ukuvuthwa isindululo, ukufunda ukususela oko socialism lwentando yesininzi kumazwe aseYurophu, yaye ce imikhwa emibi of ukulwelwa eMzantsi Merika. Ukuqonda ukuba ithuba lihle kakhulu ukwenza iNjongo yeNdebe yeHlabathi, okanye ukulahlekelwa ngonaphakade.
Ndiyayithanda le sithombe, i-New Frontier. Enye yeedolophana apho, ngokuziwayo, siya kubona ulawulo lolawulo olwaluphumelele ngecala lasekhohlo, ngokusekelwe kubunkokheli bendawo.
... ahlupheke kwaye athole inzuzo encinane ...
La mazwe angama-neophyte kwimimandla yophuhliso kunye nokuzinzileyo; Eyona nto ibhetele esingayenzayo ukuyiqonda ngesithunzi. Idemokhrasi ithathaka kangangokuba ixazululwa yindlela eyenziwa ngabanye amazwe njengeendawo zokuhlala emaphandleni, kodwa inxalenye enkulu yeli zwekazi.
Ngoko, umonakalo oqoqosho kunye nokuzimela ngabanye akunakwenzeka. Abantu abaninzi abaye ineenketho ezikhoyo, shiya elo lizwe ukuba ukuphila ngenxa yokukhathazeka, yaye abo baseleyo atshixiwe kwintlekele wokungakhuseleki liphixene epasejini lebhokisi Colombia kunye eUnited States.
Kwakhona kunzima kodwa ukwenene ukuba samkele ukuba sonke siqinisekile ukuba abapolitiki bethu banamhlanje abakwazi ukuthatha phambili. Ngoko ukuthutha umgangatho kwi-bartworks kuyisinyathelo esibalulekileyo, ubuncinane kwiidemokhrasi ezingenayo.
Xa ndenza le sithombe, andizange ndicinge ukuba kuya kuba ngummeli wesimo esincinci sezopolitiko zamazwe ethu.
... kwenzeka ntoni kunye nabanye ...
Kukho umlinganiselo ongavumelani neengcamango ezisekhohlo kwaye uhlala kwicandelo elincinci kakhulu. Kwaye elinye iqela uyaqonda ukuba oko sinako ngoku akwanelanga, kodwa kwakufuneka ubungqina ungene kwi sihlandlo entsha. Ntsilelo inkulu kweli qela kukuba ngoyaba iklasi kwezopolitiko kwaye uyindulule iye kungena enzonzobileni, ukuba ezinye ukungakhathali, ekhathala kwaye nazo inxaxheba ebomini ebalulekileyo ekwazi ukuchithwa zepolitiki circus izinto imidumba.
Okwangoku, kwiklasi yezopolitiko ngoku iguqule kwi-ajenda yezopolitiko yenzeke ngokukhawuleza, sonke siyiqonda kodwa kula mazwe abameli basemagunyeni bavame ukuphendula. I-protagonism yokweba i-errand yinto yokuba i-coliseum, ngaphezu kweyodwa ichazwa nje ngokuba ifumene inqwelo, nangona zonke iincwadi zibhaliwe malunga nale mongo. Ukukwazi indlela ezi zintsikelelo zehlabathi, siyazi ukuba ukulungiswa okulandelayo kweHonduras kusekelwe kumandla abantu; nangona ukuqonda "ngukuphi amandla" kunye "nawaphi abantu" abahlala efundeni olukhethekileyo, ngokuvulela ukunyamezela kunokuba zizodwa.
Ekugqibeleni, iipolitiki yenzululwazi ukuba ifundwe, kodwa ubugcisa xa iqhutyelwa.
Iimeko ezingcono zokuthatha inxaxheba kommi, ulawulo olusebenzayo, ukuhlanjululwa kwemisebenzi yezopolitiko, inkqubo eqhubekayo kwizicwangciso zexesha elide; Ziyiminye yemingeni. Okwangoku, sithandwa ngethuba leengxaki zentando yesininzi, apho siza kushiya khona, nokuba ngaba kukho indleko yokuxinwa kweentlalo eziyimfuneko ekupheleni. Ukubona amanyathelo abantu abangabandakanyeka kwezopolitiko, abacebisa okanye baqalise abaviwa abazimeleyo, bawuphawu oluhle. Umongo waseLatin waseMelika ubonisa ukuba kunokwenzeka ukuqhubela phambili kwaye ngenxa yoko kuyimfuneko ukuphulaphula ukungakhathaleli.
Ukuba izicwangciso zakho ziza eHonduras, woza. Baqaphele naliphi na ilizwe Mesoamerican, kodwa hayi ithuba ukwazi ixabiso lenkcubeko yalo mmandla, okwakufudula kusenzeka impucuko yamaMaya buzinze kukho umhlaba ekuthiwa Copán lilahlekile, i izixhobo ukuba uyakholiswa ngabo, yokupheka kunye nohlobo kwelizwe . Yakha isigamu sezinto ezithethayo kumajelo, kwaye ujonge umdlalo wokuzonwabisa njengemidlalo eyingozi.
Le yinye yezithombe zam zokugqibela. Umbono okhangayo ukusuka kwibhotwe likamasipala waseGalinci, ngasemva ungabona amazwe aseSalvador. Ekubeni ngaphambili, isilonda sodwala esilungele ukulungelelanisa ukuphelisa.
... Yintoni esinokuyilindela kwi-2013 ...
Iintlanganiso zakutshanje kunye Aureliano Buendía ndishiye ngokungaqiniseki ezinye zezikhundla zam. Kulula kakhulu ukuqikelela ukuba zeziphi izicelo ze-ESRI ezinokucinga ngazo nge-iPad, okanye yiziphi iindaba ezizenzekelayo i-AutoCAD 2014. Kodwa kule nto, oku akunjalo ukucinga kwam:
I-2013 iya kuba yinkxalabo yintando yesininzi. Oku kuya kwenza ingxelo yeKhomishoni yeNyaniso ibe yincwadi yokubhaliweyo kunye nequmrhu elisemthethweni ishidi lee-patches.
Kukho umngcipheko wokuba akukho unyulo kwaye ukuba isiganeko sihlehlise phantsi kweemeko ezikhethekileyo.
Abemi abayi kuxhasa enye inkunzi, kwaye iya kuba ngumdlali okhuselekileyo ngaphezu kweendlela ezitratweni.
Kwabo bethu abanethemba, kuya kuba ngumnyaka omkhulu. Kodwa kufuneka uqaphele.
Kulabo abaneengxaki zemisipha, kuya kuba ngumnyaka wokuphulaphula ngobuchule amaphephandaba. Ekuseni abo bangakwesokudla, ngemini emva kwabo bekhohlo. Ingcamango yokungalaleli ... kuphela incini iphilile.
Kulabo abangenandaba, kufuneka uvuke uze uthathe ukuma. Akunandaba nokuba yiyiphi.
... umzalwana omdala ...
Xa ndandineminyaka eyi-7, ndiyakhumbula ukuba kwakunzima ntoni kum ukuba ndidanise phezulu phezulu kwaye ndiwuthathe entendeni yesandla sam. Ndazama enye, enye, enye, kwaye iziphakamiso zomzalwana wam omdala zazingenamsebenzi. Xa umonde wakhe waphuma wathi kum:
-Inseñá, ndinike loo nto.
Ndadansa amaxesha e-3 ebonisa ukuba kwakunokwenzeka ukwenza ngokwamandla akhe. Emva koko wayeya kuthatha iintsuku ezimbalwa kwaye undixelele ukuba ndiyigcine phantsi kolawulo lwakhe, ukundikhusela ukuba ndifumane umgodi ebunzini lam.
Yayinomdla oncomekayo wokundixelela ukuba ndiyithathile njengento engenakwenzeka.
- Akunjalo nokuba omnye umzalwana omdala ususa phezulu kuye ngokungenakulungiswa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuphela kwehlabathi 2012 Kuthekani ukuba ama-Mayans ayelungile?
Post Next Impembelelo 10 + Twitter akhawunti kwi geospatial mediumOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Ezinye iziganeko zeCrisis Political Honduras"
Malunga noJorge. Enkosi ngeminqweno yakho elungileyo.
UMzalwan 'ukuba ndiwabelana ngokupheleleyo ngamazwi akho malunga neengxaki zezopolitiko kumazwe ethu, ndicinga ukuba abaninzi badlala kwiintlungu kunye nokuphelelwa ithemba ngabantu. Ndiyathemba ukuba iHonduras, njengeVenezuela, iya kutshatyalaliswa kungekudala okanye emva koko ithathe inkqubo yenkqubela kwimeko yesimo somoya.